Illinois Imba Kura Cannabis - Maitiro ekuzvarwa zviri pamutemo cannabis mu Illinois
Imba Yekukura Cannabis mu Illinois
Illinois Imba Ikura yeVanachiremba Marijuana Vagari
Mangani zvidyarwa zvaunogona kurima muIllinois?
Illinois imba kukura kwe cannabis inowanikwa kune varapi ve cannabis varwere munzvimbo yavo yekutanga yekugara - ine muganho wevashanu (5) zvidyarwa zve cannabis zvinopfuura mashanu (5) inches marefu - pamhuri & kwete pamunhu.
Teerera kana tarisa kudzokorora kweChinyorwa 10 che Kushandisa Kwako weCannabis (imba inokura). Dzvanya chinongedzo kuzere 610 peji remutemo rakapasiswa neIllinois Legislature
Mavara ezvibodzwa zvine chekuita nezvekukura kweavo Ill Illana yekurapa mbanje vagari yekugara kwavo kwekutanga iri pazasi, pamwe chete nekunyorwa kwevhidhiyo & chinyorwa pamutemo pachezvawo.
RELATED POST: KUVAKA MBEU ZVINOGONESESA PAMUSORO PENYAYA
Imba Grown Cannabis Inogona Kuita Nyore
Asi izvo, nemutemo wepazvino wekunyoreswa kwembanje pamba yekurima mbanje nekuda kwezvinangwa zvekurapa mudunhu reIllinois, varimi vazhinji kupfuura nakarekare vari kutendeukira kuInternet kuti vapiwe zano.
Kuziva maitiro ekukura cannabis muIllinois kunosanganisira kuve nekuziva nezvenyika mamiriro akasiyana aya - uye kutsvaga nzira dzekushanda nadzo zvaunazvo.
Zadza Chikumbiro uye Utore Kadhi Rekurapa Kadhi
Nehurombo, kwete chero munhu anogona kukura yavo yega cannabis muIllinois. Iwe unofanirwa kunge uri kuronga pakushandisa cannabis nekuda kwemishonga, uye iwe unofanirwa kunyorera rezinesi rekurapa cannabis - kana kadhi. Kuti uwane rezenisi, unofanirwa kunyorera - raishandiswa kutora kusvika pamwedzi gumi kusvika pagore kuti riitwe muna 2015. Zvisinei, panosvika 2020, unogona kuwana kadhi rako rekurapa muIllinois muzuva rimwe chete kana zvishoma.
Havasi vese varikutarisirwa kurima vanogamuchira marezinesi avo. Nekudaro, iyo yekutanga (uye inodikanwa!) Nhanho iwe yaunotora.
Zvakanakira Kukura Mumba
Mamiriro ekunze eIllinois akadaro kuti kukura cannabis kunze hakukurudzirwe. Naizvozvo, iwe unonyanya kubudirira kukura cannabis mudzimba.
Kune zvakanaka zvakawanda mukuita kudaro. Kwete chete iwe unokwanisa kudzora tembiricha yako, mweya, mwenje uye humhutu, asi iwe zvakare upe zvirimwa zvako nenzvimbo yakawedzera kugadzikana. Izvi zvinogona kukwidziridza kugona kwako pamusoro pakareba.
Terera Kufunga Nezvakatipoteredza Zvinodiwa
Kana iwe wakazvinyudza mune yakapfuura, iwe unogona kunge uchiziva kuti zvingapusa sei zvimwe zvidyarwa zvinogona kuva! Cannabis haina kumbosiyana. Iwe unofanirwa kugadzirisa mwenje wechiitiko chega chega chekukura uye nekupa anokwanisa kusvika makumi mana kusvika makumi matanhatu muzana. Iwe unozoda tembiricha yemakumi manomwe kusvika makumi manomwe emadhigiri (apo mwenje uri) uye makumi manomwe kusvika makumi manomwe digiri (kana mwenje uchadzimwa).
Iwe zvakare unofanirwa kuchengetedza iyo yakakodzera yemweya mweya nevheti, airport, uye firita, uye iwe unofanirwa kudzivirira kubhururuka zvakare.
Kana iwe uine rombo rakanaka rekuwana rezinesi rekusakura cannabis muIllinois, iwe ungangodaro uchidzingirira pane zvishoma kuti utange. Usazvirega uchitorwa.
Ita shuwa kuti iwe une michina yakakodzera uye kuziva-maitiro usati watanga. Kune marudzi ese ezvishandiso auchazoda kuisa mari mauri, uye mhando yepamusoro iwe yaunokwanisa kutenga, zvakanyanya kunaka kubva iwe unozozotevera.
Pazinga rakanyanya kukosha, iwe uchada:
Kamuri yekukura kana kukura bhokisi
Tora Mbeu Yakakodzera
Kuwedzera kumidziyo yakataurwa pamusoro, iwe zvakare unofanirwa kudyara mbeu yakanaka. Kana iwe uri kukura mbanje nekuda kwekurapa, iwe unoda kusarudza dhizi nehuwandu hukuru hwe cannabinoids. Kana zvisina kudaro, mhando yepamusoro ye cannabis ichasiyana, asi sarudzo dzinosanganisira sativa, indica, uye mahybrids.
Tora iyo Grower's Nguva
Kana iwe uchinge uchinge uine zvese zvekushandisa zvako, iwe unozofanirwa kuzvijaira kwese kwese kwese matanho ane chekuita nekukura mbanje. Ehe, iwe unotanga nekudyara mbeu dzako uye nekumirira kuti dzimere, asi ipapo iwe unofanirwa kushandisa kumwe kushivirira apo zvidyarwa zvako zvinofamba nepakati pekudzvara, zvinomera, zvinoyerera, uyezve pakupedzisira - kukohwa nekuporesa nhanho.
Iva nemoyo murefu, zvakadaro, uye kushanda kwako nesimba kucharipa. Kudzidza kukura mbanje muI Illinois hakusi kungopa mubayiro chete uye kunopfumisa asi kunogona kuve kunobatsira zvikuru iwe, zvakare.
Illinois Imba Kura Statue Chinyorwa 10 cheCRTA Yekushandisa Kwega
Verenga iyo IL mutemo pazasi kubva: Chinyorwa 10 cheCRTA
Illinois homegrown mbanje video
(uku ndiko kutsikisa kwevhidhiyo uye podcast iri pamusoro.)
Ah mangwanani mangwanani munhu wese. Ndakafunga kuti chingave zano rakanaka kuti pamwe uswedere pedyo nemakrofoni. Asi chiuya pano uye uendere pamusoro pezvakaitika nezuro husiku muStarfield, Illinois. Iwe unoona, Illinois yakanyoreswa pamutemo mbanje. Zvino, kana ndati Illinois pamutemo mbanje, ndinofungidzira ndinofanira kuzvikodzera. Illinois 'senate yakavhota uye yakapfuura kunyoreswa zviri pamutemo mbanje. Uye Illinois 'pamutemo mbanje yaive HB1438. Uye vamwe vanhu vaibvunza.
"Nei HB1438 uye kwete SB007?"
Saka ndiri kuzogovera skrini yangu chaizvo, nekukurumidza chaizvo. Uye ipapo iwe unozogona kuona izvi, iyo bhaisikopo.
Saka kana iwe uchienda kuGoogle cannabis Gweta, ndiyo nzira yaungandiwana nayo. Zita rangu ndinonzi Tom Howard. Ini ndiri… Ino iyi webhusaiti yangu Canannis Viwanda Gweta. Parizvino chete kero yeChicago iri kumusoro uko. Ndine nyaya ne… Google bhizinesi rangu. Asi iwe unoziva kuti zvinodaro sei.
Saka zvakadaro, iyi ikopi yebhadha. Kana ndikarova control tsvaga futi, uchaona kuti ndanga ndichitsvaga pekugara. Chikonzero chekuti nditsvagire mugari… Uye ndinotenda yaive kana iwe ukadzora F pazinda rino pano… Uye iyi dura, usanetseka, ini ndinobva ndasiya izvozvo mukutsanangurwa kwevhidhiyo iyi kana ndangopedza. Iwe unozogona kuwona izvo iyo Illinois Seneti yakapfuura zuro. Uye vamwe vanhu vari kuti, "Hakuna imba inokura?" Kutaura chokwadi ndozvandaive ndirikuratidza iwe.
Uye saka kana iwe ukaenda uye iwe unotsvaga SB ... Kwete haisi SB. Iyi ndiyo HB1438 iyo yakapfuurwa neI Illinois Seneti zuro, iyo 9th kubva pamakumi matatu neshanu mugari wechizwi achakuwana iwe kune iyo Illinois 'vanhu vakuru vekumba vanoshandisa kukura. Uye kuchine imba kukura. Nekudaro, ivo vakaunza chakananga mipimo. Tiye wekutanga arikutora sip remangwanani kofi. Ah mwari. Illinois uye kunyanya Peoria, Illinois yakanyatsonaka kune yakatsva yakagochwa kofi. Handina chokwadi kana ndaizoenda kumwe kunhu.
Saka kukura kwemba kuchiripo. Nekudaro ivo vakave nechokwadi kuti chichava mumwe munhu, chinogumira kune muI Illinois, ane makore makumi maviri nemashanu kana anodarika, ari murwere anokodzera pasi peCompassionate Use of Medical Cannabis chirongwa chekutyaira. Izvi zvinokwanisa kurima pasina muganho wezvirimwa zvishanu zvinopfuura masendimita mashanu pakureba pane imwe neimwe imba. Pasina nzvimbo yekudyara kana yehunyanzvi hwekuchenjera rezinesi. Uyezve muchikamu chino, mugari, zvinoreva munhu anga akatongwa mudunhu reI Illinois kwenguva yemazuva makumi matatu isati yasimwa.
Illinois imba inokura cannabis
Saka sevanhu vari kukuudza kuti hapana chero imba inokura muI Illinois 'pamutemo kushandiswa kwevanhu vakuru. Chikamu chechikamu, hapana kukura kwemba kune vanhu vasiri varwere vekurapa mbanje. Kana iwe uri murwere wekuromba mbanje muI Illinois saka iwe uchine imba yekukura. Zvinorevei kana ndati ... Zvakanaka zvinotsausa zvishoma. Ndakati Illinois pamutemo mbanje izvo zvine hunyanzvi ichokwadi. Ino inguva yekutanga iyo Illinois yakambovhota kuti inyorese mbanje pamutemo. Ndozvazvinoreva izvo, kunze kweNebraska, zviri bicameral. Uye saka Seneti rapfuura. Asi zvakashamisa nekuti bhiri reSeneti ndiSB007. Asi handiwo bhiri ravakapfuura. Panzvimbo iyoyo ivo vanopfuura HB1438. Uye HB1438 hongu ndiyo imba Bhiri. Uye saka imba yeBill yebhodhi ndiyo yakaunzwa kwatiri ... Uye yakazoshandurwa naCassidy muImba kuti ikwanise kuita sekuti pamba pakura vanongori varwere vekurapa mbanje. Chimwe chinhu chandiri kuenda ipapo kusvetukira kumashure ku-share share apa nekukurumidza. Ini handisi kuzokugovana chete iwe… Saka enda, zvakare iko uko, peji 40 reI Illinois Med…
Nguva ye2020 inowoneka makumi matatu nemaviri muIllinois Adult Use Cannabis Law
Zvakanaka haisi mbanje yekurapa, ndeye vanhu vakuru kushandisa mbanje manje. Ndipo paunowana imba yako ichikura kana uri murwere wekurapa. Asi ngatitaure nezve gore ra2020. Izvo zvinofanirwa… 2020. Nei kiyibodi yangu isiri kupindura? Zvakanaka, ndizvo zvinopindura. Kudzora tsvaga… Zvakanaka izvozvi zvava kushanda. Zvidiki zvetechnical nyaya zvinogara zvichiitika. Saka ngatitarisei term 2020. Uye izwi rinoti 2020 richaonekwa ka32 mumutemo uyu. Sei tichitsvaga iyo term 2020? Nekuti kana izvi zvapfuura isu tichaenda mune inonakidza nguva muI Illinois 'nhoroondo uko akawanda maficha ari chaiwo mhando dzemarezinesi ekushandiswa kwevanhu vakuru mbanje ichauya online mugore ra2020. Zviripose ndipo apo izvo zvikumbiro zvichange zvichikodzera . Yekutanga tsamba mutsvuku ichave muna Chivabvu we2020. Asi chaizvo ngatitangei neyekutanga tsamba tsamba, Ndira 1st ya 2020. Ndira 1st ya2020 ndiyo ichave zuva raunogona kuenda chaizvo kunotenga vakuru kushandisa mbanje. Inogonawo kuve iri iro zuva rinobudirira reizvi.
Zvino nezuro taive pane show neni tichitaura nezvenhau ye cannabis zviri pamutemo. Nyorera izvozvi kuti ubatane nesu. Chitatu chega chega na 2pm isu tinoenda pamusoro pe cannabis pamutemo nhau yevhiki. Uye ipapo vanowanzova nedzimwe yakakura kwazvo cannabis pamutemo nhau isu pachangosvika kubva kutepfenyuro. Vis-a-vis iyo Illinois Seneti ichipfuura mbanje. Ndine hurombo. Ini handina munhu wekukanda kuna iye anogona kuzadza nguva. Saka muna Ndira 1 wa2020 iwe uchave wakanyoreswa mbanje pamutemo uye inofanira kuve iri pamutemo kutenga. Asi hazvizove pamutemo kutenga kubva kune wese munhu. Panzvimbo iyoyo zvichave zviri pamutemo chete kutenga kubva kune yekutanga kubvumidzwa kwevakuru shandisa masangano disensary. Saka ndiri pano. Saka aya achazove ari kunyanya makambani ekurapa mbanje ari kuzozadzikiswa nawo. Uye izvo zvichave izvo zvinogona kutanga kutengesa cannabis kune vatengi pazuva rekutanga ra2020.
Zvino zvechokwadi, iyo nguva 2020 inowoneka makumi matatu nenhanhatu. Uye ini handisi kutarisa… Hezvino izvo. Izvozvi tiende, apa toenda. Ndozvandaitsvaga. Iri raMay 32, 1 nguva yekupedzisira, kupihwa kwemutemo wekushandiswa kwevakuru kushandisa marezenisi rezenisi risati rasvika munaJanuary 2020, 1. Mapazi, iro bazi rinoreva kuti bazi rezvekurima, richaburitsa vanhu vanosvika makumi manomwe neshanu vanoshandisa marezenesi musangano pasati pa Chivabvu 2021, 75 . Uye ipapo ivo vanozoita kuti vanhu vakuru vashandise application, ehe, kunyorera kwacho hakuzovi kusvika Gumiguru 1st, 2020. Zvimwe imi vakomana, zvakanaka mungangoziva izvi nezvangu. Ini ndinomiririra akawanda emakambani ehemp. Uye iyo hemp application haina kuitwa pachena kusvika munaKurume 1th gore rino. Ndizvozvo, mwedzi mumwe wapfuura nanhasi. Uye panguva iyoyo foni yangu yakaputika uye ndanga ndichibatsira vanhu vazhinji.
Asi ikozvino tichava nechinhu chakafanana chaizvo. Iko kune vanhu vazhinji vari kuenda kunoda imwe yeiyo makumi manomwe emalayisense. Uye ivo vachazoda kunyorera rimwe reaya marezinesi pamberi May 75st wa1. Asi izvi hazvisi kuzove nyore sehepisi rezinesi inonyanya kushamwaridzana uye yakanaka kusvika. Jeff Cox nedhipatimendi rezvokurapa zvirimwa muIllinois Dhipatimendi rekurima vakaita basa rakakura pane icho chishandiso. Asi iwe une hwindo refu. Sei zvichizoitwa kuti zvikumbiro zvisazowanika kusvika Gumiguru 2020st uye hazvizogamuchirwe mushure meJanuary 1? Uye ipapo hausati uchizoburitsa iwo maficha kusvikira May 20st. Saka chimbofunga nezvazvo. Gumiguru 1, Jan 1, Chivabvu 1… Runhare kubva kuSouth Carolina. Ngapasave mutengi wekutanga kundifonera nhasi.
Saka iwe unaJanuary 1st ya2021 ndipo apo sarudzo dzako dzinofanirwa. Iwe hautore kunyorera kusvika muna Gumiguru 1 wa 2019. Uye hapazovi nemakumi manomwe nenomwe. Kune ichave inodarika makumi manomwe neshanu. Ivo vari kuyedza kuisa tsoka yavo mumusuwo. Asi ivo havazotaure kuti ndiani anokupa kwemwedzi mishanu. Uye aya ndiwo marudzi emhando dzekushandisa idzo dzichange dzichirovera. Uye zvinoshandiswa zvichave zvakakura nekuti iwe unofanirwa kuisa pamwe chete timu iyi kutarisa zvese izvi mabhokisi anozove ari kuuya mune izvi zvinoshandiswa. Saka iwe unonzwisisa, kana iwe uri kuyedza kusvika kune mazana maviri uye panogona kunge paine mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe mune izvi. Hatisi kuzoita vhidhiyo izvozvi nekuti ndine musangano mune inosvika makumi mana wandinofanira kusvika.
Uye saka tinogona kutaura zvishoma nezve nguva uye kuti kukura kwemba kuchiripo kune varwere vekurapa mbanje. Ngatisvetukei zvakare mune iyo skrini yekugovera uye iwe uchaona mamwe mamwe mavara matsvuku anonakidza mazuva. Saka iyi, yekudzivirira iyo geographic kupararira kwe [condotional 00:08:58] vakuru vanoshandisa sangano rezinesi varidzi. Iyi inotevera inhamba yemarezinesi ichapihwa mudunhu rega reBSS sebhlah, blah, blah. Uye saka ini ndinogara chaizvo muPeoria, tiri kuenda kune vatatu. Izvo zvakanaka freakin inotonhorera. Nzvimbo yeSt. Louis inowana ina, yeChicago zvechokwadi inowana makumi mana nemashanu. Ndinoreva kuti kune zvakawanda kuI Illinois… ndinoreva kuti Rock Island ndiyo chete yekuwana imwe yekuchema mhere. Asi Peoria kuwana vatatu. Ehe, nzira yekuita izvozvo [Jehan 47:00:09]. Imwe yakanaka.
Uye nezvimwe zvimwe, iripo Januware 21st inorimwa. Ngatione, dhipatimendi sere ... Ah handina kana chokwadi kuti icho chii. Iyo purogiramu rezinesi nharaunda koreji cannabis basa rekutyaira chirongwa. Ah izvo zvinonyatso kutonhora. Ndicho chimwe chinhu chandaisamboziva… Ini handina kumboziva kuti chaivemo. Chinyorwa 25, Cannabis College, Cannabis Vocational driver chirongwa. Ndizvozvo Illinois, enda munharaunda koreji uye makuru mune cannabis. Fuck ini ndingatosainira. Chinhu pamusoro peizvi ndeaya mabhuru maviri akapatsanurwa. Bhiri iro raive SB007 iro Seneti harina kupfuura, panzvimbo pacho Seneti rakapfuura HB1438 sezvakaunzwa muImba. Iyo bhaari ndeye 610 mapeji marefu. Saka iyo… Kuve yenharaunda yekoreji cannabis basa rekutyaira chirongwa ichi chiri mukati umo hapana munhu ari kutaura nezvazvo. Izvo hazvishamise kwandiri zvakanyanya. Asi zvinoratidzika sekuuya kuIllinois, yakakura mune cannabis. Zvinotapira.
Uye ndine urombo nezvazvo. Ini ndaifanira kungo tick kuburikidza ese aya 2020s. Pane makumi matatu nemaviri ari muchiitiko. Uye ikozvino ini ndiri kuenda kukwira kumashure kune izvo uye isu tiri kuzotaura chaizvo nekukurumidza nezve chii chingave chinonakidza chimiro cheI Illinois vakuru shandisa pamutemo akapfuura nezuro nedare reSenate. Uye tine tariro tichazotaura nezve ingave iri nyaya yakakodzera. Uye handizive kana zvichizoitika. Tichataura nezvazvo nekukurumidza. Asi 32 craft grow licence neChikunguru 40 ya1. Uye ipapo ivo havagone kutengesa kusvika mushure meZvita 2020st of 21. Uye ipapo December 2021st of 21 ivo [inaudible 2021:00:11] kusvika kune mamwe makumi matanhatu eunyanzvi kukura marezenisi. Saka kuchave nemazana zana, zana zana ikozvino, hunyanzvi kukura marezinesi anouya. Uye ipapo pane izvo zvinorambidzwa kune avo ehunyanzvi kukura marezenisi. Uye ini ndicha… Uyezve ichi chimwe chavo. Uye kuti hapana nguva yekusona yekusakura muridzi inodarika 19 uye zvimwe zvinotadzisa. Uyezve hezvino zvinhu zvekushandisa izvo zvatichapfuura zvakare.
Ivo varimi vekukwikwidza vanonakidza mupfungwa yekuti ndiyo ichava nzira yekuti vanhu vadzoke mukati me cannabis space. Uye pane zvisingakwanisi pane ndiani uye chii chingave chake vese. Pachave neakawanda wedanda jamu imomo yekugovera, kwehunyanzvi kukura. Uye mushure meizvozvo ivo vapinda mukutamba, Illinois inomira… Nekuti sekukodzera, iwe anokura, iwe unoita, iwe unoendesa. Rudyi? Ndiani ari kutyaira poto? Ndiyo ichava rezinesi nyowani iyo iri kuuya, yekufambisa. Saka mushure meizvi, imwe yeaya mazuva, imwe yeaya matsamba matsamba ari imomo, iwe unokwanisa kuwana imwe mhando rezinesi. Uye iyo disensary uye nzvimbo yekudyara uye processor haigone kutakura iyo cannabis. Ivo vanozofanira kuendesa kune iyo transporter iyo ine rezinesi kuendesa iyo gangi. Saka ndiri kuzoputira izvi nekuti allergies vari kundiuraya.
Sezvo iwe ungangodaro usiri kuziva, Illinois iri kutambudzika kuburikidza, zvakanaka nyika yose kutambudzika kuburikidza neinogona kunge iri imwe yemafashama akaipisisa kubvira The Great Mafashama enenge 1927. Kana chero chii heck chavakataura panhau. Chibage hachizi chaizvo muminda. Minda yacho marsh. Unogona kurima mupunga. Ndo… Isu tine akafanana nemazinga emupunga paddy emvura kunze uko muIllinois. Uye ini ndinofunga kuti yakanyatso kudzosera hemp chirimwa zvishoma. Ndiani ane hanya? Nezuro, iyo Illinois Seneti yakavhota kunyoresa zviri pamutemo mbanje. Ndinovimba zvinoitika izvozvi, nekuti Illinois Legislature inomukira neChishanu, mangwana, Chivabvu 31st. Nhasi uno Imba ichapfuura iri bhajeti, HB1438. Mangwana JB Pritzker ichaisayina kuti rive mutemo. Asi pamwe zvinokurumidza. Zvimwe vanoda nguva kuti, iwe unoziva, kushandisa mhando idzi dzemusoro. Uye izvo zvaizove zvinoshamisa mwedzi mumwe kubva kwaari uchiuya wekutanga vhiki yaMay uye wozoita musangano wenhau uyu. Kwaakaburitsa iwo mapeji mapfumbamwe andakagadzira peji. Uye iri richava peji zvakare. Asi iri rino richava peji rechinyorwa kusvika rakanyanya kutariswa pakurima kwemba kumba kwevakuru kushandisa mbanje mu Illinois. Uyezve zvimwe zvinobatsira nyaya.
Aya ese mapeji mazana matanhatu negumi, chero bedzi achipfuura, achaita kuti zvemukati zvirambe zvirinani kuve nyore. Asi zvakare zvimwe zvinotyisa. Nekuti pandinogadzira izvi zvirimo iwe unosimuka pawebhu uye vanhu vanokufonera. Uye ipapo vanhu vanoda kuti iwe uvabatsire kuisa pamwechete izvi zvinoshandiswa. Uye zvechokwadi iwe uri zvachose pane izvo. Uye saka yakawanda… Icha… Ndingave ndiri grey pagore. Tichaona. Ndinovimba ndinogona kurara. Saka mangwana, tinovimba vanopasisa yavo bhaisikopo uye ipapo JB Pritzker ine musangano mukuru wenhau. Wese munhu anoti chii chinoshamisa ichi ichi chichava kune nyika yeIllinois. Uye zvichave. Uyezve tinofambira mberi mukati. Nekudaro, handizive kana zvichizoitika nhasi. Hazvina kundishamisa. Izvo zvinoshamisa chaizvo kana Illinois ikava yekutanga yemutemo nyika kunyoresa mbanje zviri pamutemo. Uye kuti vaite izvi vaida vese kwete Mutungamiriri, gavhuna uye neDzimba mbiri dzeMutemo weNyika. Uye ipapo ivo vachiri kudikanwa… Uye ini ndinogona…
Kuti ndipedze izvi ini ndichagovana kupera kweI Illinois vakuru shanduro yekushandisa. Izvo zvinopera nezvinyorwa zvakashata 999. Ini ndinotenda iyi yakadhindwa na [Herman Cane 00:15:21]. Sezvauri kuona iwo ane 610 mapeji akareba. Hapana kuwedzera kana kunonoka. Ah gosh. Ehe. Nekuti zvimwe vanoisa izvo ... Zvakanaka. Iye zvino coder yangu muIndia inoda chimwe chinhu. Zvakanaka, ndizvozvo izvo zvave kungori kuita kwangu. Iwe unowana imwe nguva uye ipapo vanhu vanoda zvinhu. Zvakanaka, ndinofanira kusvika kuhofisi. Ndine mumwe munhu anopinda.